သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စွန်းတစ်စဖွင့်ဟသွားခဲ့တဲ့ဒီလစ် - Sports Gabar
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ကစားသမားခေါ်ယူမှု အနည်းဆုံး (၄)ခုပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပြီး၊ အေဂျက်လူငယ် ဒီဂျောင်ကို ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ကာ ဈေးကွက်အတွင်း နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအဖြစ် ဒီလစ်နဲ့ ဂရေ့ဇ်မန်း တို့ကို ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။
အသက်(၁၉)အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ဒီလစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ နေရှင်လိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ နယ်သာလန်အတွက် ပွဲထွက်ကစားပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နေရှင်လိဂ်ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးချိန်ကျမှ သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ပြောကြားထားတဲ့ ဒီလစ်တစ်ယောက် အခုဆိုရင် သူပြောထားတဲ့ အချိန်ကာလ ထဲကိုရောက်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူပြောင်းရွှေ့မယ့် အသင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး အရိပ်အငွေ့တွေပါနေတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလစ်က-
” ဘာစီလိုနာကို ပြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လား? အဲဒါဆို အရမ်းကောင်းပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာက အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ရပါဦးမယ်၊ ကျွန်တော့် နှလုံးသားက ဘာပြောလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်ခုထိ မသိသေးဘူး ”
” အေဂျက်နဲ့ နယ်သာလန်တို့အတွက် ကျွန်တော် တစ်ချိန်လုံး အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီးပြီ၊ အခု ကျွန်တော့်ရဲ့အားလပ်ရက်အတွင်းမှာ အနာဂတ်အကြောင်းကို စဉ်းစားသွားမှာပါ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားပါမယ်၊ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော် အနားယူပါဦးမယ် ” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလစ်ရဲ့ပြောကြားချက်အရ နယ်သာလန်နဲ့အေဂျက်အသင်းဖော် ဒီဂျောင် ရှိနေတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းထံ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သူ့အနေနဲ့ဆန္ဒရှိနေပုံရပြီး၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ရက် အပြီးမှာတော့ တိကျသေချာတဲ့အဖြေတစ်ခုကို ထုတ်ပေးသွားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
သူ့ရဲ့အနာဂတျနဲ့ပတျသကျပွီး တဈစှနျးတဈစ ဖှငျ့ဟသှားခဲ့တဲ့ ဒီလဈ
ဘာစီလိုနာအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ကစားသမားချေါယူမှု အနညျးဆုံး (၄)ခုပွုလုပျသှားဖို့ရှိနပွေီး၊ အဂေကျြလူငယျ ဒီဂြောငျကို ချေါယူထားပွီးဖွဈကာ ဈေးကှကျအတှငျး နောကျထပျခွလှေမျးအဖွဈ ဒီလဈနဲ့ ဂရဇျေ့မနျး တို့ကို ပဈမှတျထားနပေါတယျ။
အသကျ(၁၉)အရှယျသာရှိသေးတဲ့ ဒီလဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျဂနှနေကေ့ ပျေါတူဂီအသငျးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ နရှေငျလိဂျဗိုလျလုပှဲမှာ နယျသာလနျအတှကျ ပှဲထှကျကစားပေးခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။ နရှေငျလိဂျပွိုငျပှဲ ပွီးဆုံးခြိနျကမြှ သူ့ရဲ့အနာဂတျနဲ့ပကျသကျပွီး ဆုံးဖွတျမယျလို့ ပွောကွားထားတဲ့ ဒီလဈတဈယောကျ အခုဆိုရငျ သူပွောထားတဲ့ အခြိနျကာလ ထဲကိုရောကျနပွေီလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူပွောငျးရှမေ့ယျ့ အသငျးနဲ့ပကျသကျပွီး အရိပျအငှတှေ့ပေါနတေဲ့ အဖွတေဈခုကို အငျတာဗြူးတဈခုမှာ အခုလိုပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလဈက-
” ဘာစီလိုနာကို ပွောငျးဖွဈခဲ့ရငျလား? အဲဒါဆို အရမျးကောငျးပါလိမျ့မယျ၊ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဘာက အကောငျးဆုံးဖွဈနိုငျမလဲဆိုတာကို ပွနျကွညျ့ရပါဦးမယျ၊ ကြှနျတေျာ့ နှလုံးသားက ဘာပွောလဲဆိုတာကို ကြှနျတျောခုထိ မသိသေးဘူး ”
” အဂေကျြနဲ့ နယျသာလနျတို့အတှကျ ကြှနျတျော တဈခြိနျလုံး အာရုံစိုကျခဲ့ပွီးပွီ၊ အခု ကြှနျတေျာ့ရဲ့အားလပျရကျအတှငျးမှာ အနာဂတျအကွောငျးကို စဉျးစားသှားမှာပါ၊ ပွီးတော့ ကြှနျတျော ဘာလုပျသငျ့လဲဆိုတာကို ဆုံးဖွတျခကျြခသြှားပါမယျ၊ လောလောဆယျတော့ ကြှနျတျော အနားယူပါဦးမယျ ” လို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီလဈရဲ့ပွောကွားခကျြအရ နယျသာလနျနဲ့အဂေကျြအသငျးဖျော ဒီဂြောငျ ရှိနတေဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးထံ ပွောငျးရှဖေို့ သူ့အနနေဲ့ဆန်ဒရှိနပေုံရပွီး၊ သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျအားလပျရကျ အပွီးမှာတော့ တိကသြခြောတဲ့အဖွတေဈခုကို ထုတျပေးသှားဖှယျရှိနပေါတယျ။
Previous Article အက်သလက်ဂိုးသမားကိုမျက်စိကျလျက်ရှေိနတဲ့ မန်ယူနိုက်တက်
Next Article ဖီဖာပြောင်းလဲကျင့်သုံးမယ့်ဘောလုံးဥပဒေသစ်များ အပိုင်း(၁)